Agba Fluorescent Acrylic Sheet, China Fluorescent Colors Acrylic Sheet Manufacturers, Suppliers, Factory - Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd.
>lọ>Product>Agba Acylic Sheet>Fluorescent agba acryli mpempe akwụkwọ
Fluorescent Colors Acrylic mpempe akwụkwọ nwere agility agba mara mma. Enwere ike igosi ọmarịcha mpempe akwụkwọ acrylic fluorescent na ìhè eke. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka akwa ụlọ ahịa, ngosipụta ịre ahịa yana ngwa ime ụlọ ndị ọzọ.
◇ Nnyefe dị elu ruo 93%;
Sheets Mpempe akwụkwọ acrylic nke nwere ọkwa dị elu nke emere naanị 100% akụrụngwa na-amaghị nwoke.
◇ A na-ekpuchi mpempe akwụkwọ acrylic niile, akwụkwọ nkwa anaghị agbanwe mgbe ị na-eji mpụga, nwere ike iji n'èzí ruo afọ 8-10.
Enweghị isi mgbe ị na -egbutu ya na igwe ma ọ bụ igwe CNC, na -adị mfe ihu ma na -akpụzi.
A na -ebubata ihe nkiri na -echebe, buru ibu ma dị mfe iwepu, enweghị gluu fọdụrụ.
◇ Nkịtị ọkpụrụkpụ kachasị na oke zuru oke